डा. केसीले डिन नियुक्तिमा किन जिद्दी गर्नुपर्यो?
उच्च शिक्षाको एउटा हाँगा नै चिकित्सा शिक्षा हो, जसको सुधारका लागि गोविन्द केसीले पटक–पटक र अहिले पनि अनसन बस्नुभएको छ। चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई संलग्न हुन दिने भनियो, तर त्यो संलग्नताको प्रक्रिया र मापदण्ड कसरी स्वच्छ बनाउने तथा राजनीतिकरण र पैसा लगायतको चलखेल कसरी रोक्ने भन्नेमा कसैको पनि विचार प्रस्ट भएन।
डा. केसीको अनसनको शृंखला लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। नेपालका अरु आन्दोलन कसरी तुहाइन्छ भन्ने उदाहरणसँग उहाँको अनसन ठ्याक्कै मेल खान्छ। आज एउटा आन्दोलनकारी समूहसँग सहमति ग¥यो, अनि भोलि पहिलेको भन्दा चर्को माग राख्ने वा विपरित माग राख्नेसँग पनि सहमति ग¥यो। यहाँ चलिआएको प्रवृत्ति यही हो। यस आधारमा नेपालको वर्तमान अर्थ–राजनीतिमा जति सम्झौता गरे पनि ती लागू हुन्छन् भन्नेमा मलाई शंका लाग्छ।
मुलुक संघीयतामा गएको छ। अब केन्द्रले मात्र विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने हो कि प्रान्तहरुले पनि बनाउन पाउने हो? जस्तो, प्रदेश नम्बर ३ ले हाम्रो प्रान्तमा विश्वविद्यालय खोल्न चाहन्छौं भन्यो भने उसले विश्वविद्यालय खोल्न चाहने पक्षहरुसँग कस्तो खालको विश्वविद्यालय र कसरी खोल्ने भन्ने बारे वार्ता गर्न र सम्झौता गर्न पाउनुपर्छ l
हामी यो–यो सुविधा दिन सक्छौं, तपाईं यस्तो शिक्षा दिनुस् भनेर केन्द्रले किन नभन्ने?
डा. केसीले भन्नुभएको छ, प्रत्येक प्रान्तमा एउटा मेडिकल कलेज सरकारले खोल्नुपर्छ। प्रान्तले विश्वविद्यालयको सहजताका लागि राम्रा–राम्रा नियम ल्याउने हो भने डा. केसीको सत्याग्रहबाट उठेका धेरै विषय सम्बोधन हुन सक्छ। भोलि प्रान्तको स्तरमा खोलिने राम्रा–राम्रा मेडिकल कलेजलाई संघले कसरी सहयोग गर्ने भन्ने बहस आजै हुनुपर्यो। कसले खोल्ने भन्ने विषयमा पनि खुला छलफल हुनुपर्याे। तीस वर्षपछिको नेपालमा हामीकहाँ यस्ता–यस्ता मापदण्ड पूरा गरेका विश्वविद्यालय आउनसक्छ भन्ने नियम अहिल्यै प्रस्ट हुनुपर्यो।
म आफैं अमेरिकाको निजी विश्वविद्यालयमा पढेको मानिस हुँ। म निजी विश्वविद्यालय सबै ‘चोर’ हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्दिन। संसारमा अत्यन्त धेरै उत्कृष्ट विश्वविद्यालय निजी स्तरकै छन्। संसारका अरू ठाउँमा निजी विश्वविद्यालय राम्रा हुने तर हाम्रो देशमा चल्नै नहुने भन्ने होइन। यसको मतलब, नोट छाप्ने निजी विश्वविद्यालय खोल्न पाउने भन्ने कुरा पनि पटक्कै मान्दिनँ। तर, यस्तो विषयमा हामीकहाँ बहस नै भएन।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १६, २०७३ २३:०९:४०